WARBIXIN:Muxuu salka ku hayaa hirdanka u dhaxeeya Puntland & Somaliland? – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
WARBIXIN:Muxuu salka ku hayaa hirdanka u dhaxeeya Puntland & Somaliland?
June 23, 2020 Abdulkadir Mohamed Hussein 18
GAROWE(P-TIMES)- Kadib markii dhawaan uu kusoo gaba gaboobay dalka Jabuuti shir weyne u dhaxeeyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda Somaliland ayaa waxaa siyaabo kala duwan shirkaasi uga hadlay masuuliyiin iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo Puntland.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni oo khudbad ka jeedinayey furitaanka kalfadhigii Baarlamaanka Puntland ayaa shirka Jabuuti ku tilmaamay mid aan munaasib ahayn, waxaana uu eedayn u jeediyey madaxda dowladda dhexe.
Mr. Denni ayaa sheegay in Puntland aysan aqbalayn go’aan kasta oo kasoo baxa shirka Jabuuti, waxaana uu madaxda dalka ku eedeeyey in awood isku koobid, la tashi la’aan iyo waxqabad.
Somaliland ayuu ku sheegay in aysan haboonayn in lala hadlo halka uu xaaraan timeeyey Denni dadaalada wada hadal ee ay wadaan dowladdaha Maraykanka, Jabuuti iyo Ethiopia si xal ay u wada gaadhaan labada dhinac.
Somaliland ayaa dhankeeda iyada ka hadlay hadalka kasoo yeedhay madaxweyne Denni, waxaana uu sheegay wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Somaliland in Somaliland wada hadal iyo wax is waydiin ay ka dhaxayso oo kaliya dowladda federaalka Soomaaliya taas badalkeedna uu Denni ka hadlay arimo aan qusayn Puntland.
Wasiir ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in aysan waxba ka dhaxayn Puntland iyo Somaliland, isagoona hoosta ka xariiqay in Somaliland ay wax walba kala hadli doonto dowladda dhexe.
Hadaba weerar iyo weerar celis kadib maxaad dhacay? Ma xiisado cusub ayaa kasoo kordhay labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland?
21-kii June ayey ahayd markii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Denni uu si gaar ah uga hadlay arimaha deegaanada Sool iyo Sanaag, waxaana uu madaxweynuhu isaga oo khudbad u jeedinayey ciidamo laga kala keenay magaalooyinka Garoowe, Badhan iyo Qardho oo tababar loogu soo xidhayey magaalada Qardho uu Somaliland ugu baaqay in ay ka baxdo deegaanada ay kaga sugan tahay Puntland.
Hadalka Denni oo u muuqday fariin hanjabaad ah ayaa xambaarsanaa in Somaliland ay kaga huleesho deegaanada ay kaga sugan tahay goboladda Sool iyo Sanaag, waxaana uu yidhi sidatan “Somaliland waxan ugu baaqayaa in ay dhulka Puntland ee ay joogto si nabad ah uga baxdo”.
Hadalka Denni ayaa Somaliland iyana ka jawaabtay waxaana wasiirka Warfaafinta Somaliland Saleebaan Cali Koore oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Hargeysa uu sheegay in Saciid Denni uu ugu hanjabayo Somaliland ciidamo aan gaadhayn 200 oo askari, isagoona sheegay in goboladda Sool iyo Sanaag ay ka tirsan yihiin Somaliland.
Mr. Koore ayaa sheegay in ciidamada Somaliland aysan wali gaadhin xaduudahooda sharciga ah oo uu ula jeedo deegaanka Yoocada, taas badalkeedna aysan jirin cid ay uga wel wel qabaan oo ay tagi karaan waa sida uu hadalka u dhigaye.
Saleebaan Koore ayaa madaxweynaha Puntland u sheegay in ay fiicnaan lahayd in uu dib ugu laabto shaqooyinkiisii ganacsiga, isagoo ku tilmaamay arimaha uu ka hadlayo kuwa uusan maarayn karin marka ay yimaadaan xaalada dagaa.
“Denni waxaa u fiican in uu sibidhkiisii iska iibsado 200 oo askari ayuu Somaliland ugu soo hanjabayaa, Somaliland wax way iska celin kartaa cidna waxba ka weydiin mayso xuduudaheeda” Sidaasi waxaa yidhi wasiirka Warfaafinta ee Somaliland Saleebaan Cali Koore.
Hadaba maxaa xigay hadalkii Koore? Fagaaraha dagaalka saxaafadeedse masii socon doonaa?
Iyadoo wasiir Koore uu ku tilmaamay madaxweyne Denni shakhsi aan awood u lahayn maaraynta arimo badan ayaa waxaa isna dareen celiyey hadalkiisa wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdilaahi Cali Xirsi Tima Cadde oo u jawaabay dhigiisa wasiirka Warfaafinta Somaliland Saleeban Cali Koore.
Mr. Tima Cadde ayaa sheegay in Puntland ay leedahay ciidamo ku filan, kuwaas oo qaarkood loo soo xidhay tababaro ciidan halka kuwa kalena ay ku diyaarsan yihiin jiidaha hore.
Waxa uu ku tilmaamay wax laga xumaado hadalka kasoo yeedhay wasiir Koore, isagoona si gaar ah uga hadlay arimo ka taagan gobolka Sool halka uu sheegay in goboladda Sool iyo Cayn ay ka tirsan yihiin Puntland.
“Waxaan rabaa inaan u sheego Saleeban in dhulka madaxweyne Denni ka hadlay uu yahay Puntland hadii ay Somaliland iskaaga bixi weydaana uu dhig ku dadaan doono, waxaa saka ku arkayey baraha bulshada ceel-biyoodyoh laga qoodayey Sool iyo Cayn oo u joojiyey wasiirka biyaha maamulkaas una ku tilmaamey sharci daaro taasa Saleeban ku filan gumaysiga lagu hayo dadka reer Sool iyo Cayn” Sidaas waxaa yidhi wasiir Tima Cadde.
Tayada ciidamada Puntland ayuu si gaar ah uga hadlay wasiirku, waxaana uu sheegay in ay diyaarsan yihiin ciidamo badan.
“Saleeban ayaa u sheegay in 200 askari ay ahayeen, kumanaan baa loo soo xidhay tabaabaro, kumanaan kalena difaacay ku jiraan Puntlandna iskaga filan inay ka saarto dhulkeeda Somaliland”.
Marka laga yimaado hadalka kul kuluul ee ay warbaahin is waydaarsanayaan madaxda labada dhinac ee Puntland iyo Somaliland ayaa waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan sababaha ka dambeeya dagaalka siyaasadeed iyo midka fool ka foolka ah ee u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland.
Si dhow mar aan uga hadalno xaalada waa mid ku salaysan dirir iyo dagaal joogto ah oo dhanka saxaafada ah, waxaana arimaha oo idil ay salka ku hayaan kala sheegashada goboladda Sool iyo Sanaag oo dhinacyada Puntland iyo Somaliland ay ku muransan yihiin, iyadoona dagaalo kala duwan ay ku dhex mareen ciidamada labada dhinac deegaanadaasi.
Lama oga waxa uu xaalku ku dambayn doono, waxaase Puntland ay dowladda ka dalbatay in Somaliland aysan kala hadlin arimaha maamulista hawada dalka sida uu sheegay wasiirka Duulista Hawada iyo Garoomada Puntland Ilyaas Cismaan Lugatoor.
Waxa uu sheegay wasiirku in maamulka hawada ay kawada hadli karin dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo Somaliland isla markaasna ay Puntland aqbali doonin wixii kasoo baxa labada dhinac oo ku saabsan wada halada Somaliland iyo Soomaaliya ee dhanka duulista hawada.
“Hawada Somaliland 10-daqiiqa oo la dulmaro tan Puntland la dulmaaro 1-sac iyo 28 daqiiqo in la yidhaahdo hawada Soomaaliya waxaa loo goynaya Somaliland waa wax aan soconayn, waxaa muhiim ah in hawada si siman lagu qayb aado shirka Jabuuti ka dhacaya ee loo balansan yahay” ayuu yidhi wasiirku.
Arimahan oo idil ayaa dhacaya iyadoo isbadalka dalka kusoo wajahan uu badali karo wax walba maadaama doorasho xasaasi ah ay ka dhici doonto dalka, taas oo wax badan ka badali karta xaalada dalka iyo arimaha siyaasadeed ee haatan taagan balse waxaan xal loo heli doonin khilaafka u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland.
Puntland hanjabaadeedu waxay soconaysaa haddii dadka SSC ay diyaar u yihiin iyagoo mideysan inay dhulkooda ka saaraan odayaashii SNM usoo dagaallamay. War nimankan reer SNM raggoodii wuxuu ku dhammaaday dagaalkii SNM. Maanta dhulka SNM, toddobadii dumar guurdoon ah waxaa kusoo aadaya hal nin. Ama dacaayad u qaado ama ha u qaadan. Taa waxaa dheer, waxay intooda badani leeyihiin dhaqan ah in aan ninku guursan wax ka badan hal xaas. Bal baaritaan samee oo soo xusuuso inta nin aad taqaan ee reer SNM ah. Immisaa labo xaas ama ka badan leh? Ma garanayo, ma himmadooda raganimo ayaa hooseeysa! Kolley qaatku saamayn buu ku leeyahay.
Ciidanka furimaha u jooga waa dhallinyaradii reer SSC oo isimmo iyo siyaasiin shilinqaateyaal ah ay meesha keeneen. Dad gumeysi raalli ku ah yaa xorayn kara?
Kuwa ku doodaya in Puntland hab qabiil ku doonayso dhulka SSC, waxaan weyddiinayaa idinku kacdoonkii SNM ma qabiil ahaan baad ku gasheen mise mustacmaraddii British Somaliland ahaan? Idinku dhulka SSC ma waxaad ku doonaysaan Ingiriis baa na wada gumeysan jirey iyo waan kala guursannaa? Oo Soomaali yaa deris ah oo aan kala guursan?
Dhabayaco Faan Iyo Booto U Daa
Noolow Madaxweyne Farmaajo Wiilka Aanu Abtiga U Nahay Ee Mareexaan.
Libaax Libaax Dhalay.
Hooyadiiba Wiil Dhashay Waad Soo Noqon Doorashada Balan Weeye Abti
Majeeerteenay Guska iidoorka ayay jeceshahay.
Puntland dhibka haystaa waxaa abuuray markaay waayeen,waxay 18 sano si baha bahaa ugu qadhaabsan jireen, sida:
– Budhcad badeed ayaan la dagaalmaynaa. Hada iyagaa abuuray.
– Garoowe 1,2 & hooyada Federaalka
– Dastuurka Soomaaliya anagaa samaynayna
– Caawimada aduunku siiyo Soomaaliya ugu yaraan 25% in Garoowe la keeno
– Alshabaab ayaan la dagaalamaynaa oo buuraha noo galay
– Dhulbahante xildhibaanadiisa anagaa Xamar u iib gaynayna
Lixdaa Tuunbo oo ay bilaash ku jiqi jireen markay ka xidhmeen waxay bilaabeen;
– Xanaaq, masayr, waxaan nagala tashan ma soconayaan, dastuur baa la xaday, Somaliland baa na qarxisa, Galmudug baa na qarxiya, dawlada xamar baa na qarxisa, waxkasta waa canbaaraynaynaa, dawlada Xamar go, aan baa ka gaadhaynaa. kkk Liiska ma dhamayn karo.
Waar reer Puntland runta isu sheega, waxaa boobi kadheen bahabahaa waa ku boobteen. Laakiin ku qanca in tabahaa laydunku fahmay hadana dhamaadeen. Joojiya qaylada oo mabda yeesha. Ku qanca inaad la mid tihiin Galmudug & K. Galbeed. Ama iskaga baxa Koonfur Soomaaliya.
FG; Puntland markaan leeyahay waxaan u jeedaa hogaanka siyaasada. Shacabka debed buu ka joogaa.
Madasha intaan Calliizha oo cadhaysaa iigu imaan waa ka caraabayaa nabadeey!
kkkkkkkkkk kkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkk kkkkkkkkkkk
Puntland dhibaato baaxad weyn ayaa ka heysata gobolada Sool iyo Cayn ee dhulbahante dego.
Waa arrimo aad isugu murgan oo u baahan siyaasad xeeldheer iyo aqoon durugsan.
Iidoor lagama jecla degaanada dhulbahante kumana qabaan wax kalsooni hase yeeshe sidee beey u dhex joogaan :
1-Kow dhulbahante iyo iidoor waa dad isku dhaqan ah isku lahjad ah isla markaana badankood ood wadaag ah.
2-iidooku waxay dhulbahante ula dhaqmaan labo qaab oo is dhinac socda.. Qaab waa wax siin aad u gacan furan oo iidoor dhaqaalihiisa 50% wuxuu ku baxaa soo xero gelinta dhulbahante.. Qaab labaad waa bahdilid.. iidoor wuxuu isticmaalaa system degan oo lagu bahdilo waxgaradka,salaadiinta iyo siyaasiyiinta dhulbahante..
Waxaa tusaale u ah Xaabsade oo ahaa ninkii iidoor u gacan geliyey Laascaanood markey ku dan gaareyn dhulka ayeey ku jiideyn.. Waxaa ka mid ah guddoomiyaha baarlamaanka Baashe isagoo lagu dhex feerey ayuu weli marabi u yahay… Waxaa ugu dambeeyey Professor Cali Khalif oo ah ninka ugu kibir badan Daarood uguna qabka weyn markuu maamulka Khaatumo u gacan geliyey iidoor daaqadaha ayeey ka xirteyn, waxaa hadda lagu casumudaa aroosyada ka dhaca Hargeysa, dhallinyarada iidoorkana jaamacadaha ka qalin jibaya wey ku maadeystaan markuu yimaado xafladahooda…
3.Iidoor wuxuu aad ugu guuleystey in uu naceeb weyn dhexdhigo Hartiga dhexdiisa waana arrin laga soo shaqeeyey kudhowaad hal qarni waxaana ka qayb qaatey abwaanada sugaanta ee iidoor. Sheekooyinka layaabka leh ee iidoorka alifeyn waxaa ka mid ah in markuu Saciid Harti dhashey ay dhimatey Maxamed Harti hooyadii..Dhulkii durug dhulkii durug Dhulbahante baa dhashey..
Ugu dambeyntii waxaa soo qoridoonaa sida looga badbaadikaro dhibaatooyinkaas
@Barre qoraal-kaagu waa is dabrayaa.kkk Waxaad qortay;
“Iidoor lagama jecla degaanada dhulbahante kumana qabaan wax kalsooni”
Qodobka kowaad-na waxaad ku qortay;
“Kow dhulbahante iyo iidoor waa dad isku dhaqan ah isku lahjad ah isla markaana badankood ood wadaag ah”
Laba sadar oo isku xiga ayaag ku qortay Dhulbaghante & Isaaq isma Jecla mara waa is dhaleen oo waa isku dhaqan ehela. Labdaada qoraal weys beeninayaa.kkk
Labaad waxaad tidhi Isaaq Dhulbahante wuu iibsadaa. Nedel baad tahay bilaa akhlaaqa ee dhulbahante maaha qabiil la iibsan karo.
Sadexaad qoraalkaaga jaahilnimo & cuqdad baa ka buuxdee soo baro sida wax loo qoro!kkk
Anigu kula caytamaayo, nin caytamey waa nin laga badiyey. Waxaan kuu heestey in aad tahay nin Odey waxgarad ah laakiinse maanta beey cimaamadii kaa dhacdey.
Waxaan garta u dhibayaa Marwo Caliizha in ay noo kala gar naqdo…. Marwo ku soo dhowoow Qaali.
Waar Calliizha hanagu soo toosin, anaa xaal kusiiyee kkk salacalee. Adna ka iska jir cayda Dhulbahante.
Soomaali Dhulbahante baan ugu jeclahay waxaan jeclahay wanaagooda iyo horumarkooda mana iga mudna in aan caayo.
Waxaan aad u jeclahay in ay ku guuleystaan Dawlad Goboleedkooda Khaatumo oo ay ka hoos baxaan labada yeey iidoor iyo dhabayaco.
Waan kaa guddoomey raali gelinta adigana ka raali noqo waxaad dhibsatey ee ku jirey qoraalkeyga.
VIVA KHAATUMO VIVA DHULBAHANTE.
A arar aad baan kuugu taageer sanahay sxb fikir kaas geesinimada Iyo caqligu KU dheehan yahay waa sax hadalka aad KU hadashay
Dhulbahante hayska xoreeyo iidoor ka gumaysta oo ha soo raacaan dadkooda hartiga ah ee u hiilinaya gumaysigana ka xoreynaya hadii kale dee iidoorka xaarka ha ka dhaqaan
Mubarik Yuusuf dhilooyinka iidoor oo tii KU xaartay ay ka mid tahay ayaa guska majeerteen jecel naaga iidoor waa wada dhilo mayaba mayaqaanaan Mubarik Yuusuf adigu waxad ka mid tahay wa moorgan hargaysa haystay kuwii wacaladii dhashay ee hooyooyinkood majeerteen KU ka dhalay markaa adigu wacal baabad tahee madaa majeerteen wax ka sheegi karaba pich hhh
anigoo xanaaq la karkaraya waa ikan,
ganaca hadaan kaa tumi waayin heedhe anaa kaa daran,kkkkkk,ha cararin dee fuleyahow,hhhhh
garta adaa ka leh odaygan baqdintu dishay muDaNe.
Dalmar iyo Mubarik:
Labo qof oo aan inaba,caqli u saaxiib ahayn baad tihiin.
War waa ceeb in qabaa’ilka iyo hablaha Soomaaliyeed la caayo.
Garaadka iyo garashada want baad ka hor imaanaysan.
Qabyaalada Jaahilga yeysan meel xun idingryn.
Puntland hadaladeeda wakhtigan waxa lagu macnayn karaa “MASAYR & HUNGURI XUMO”.
Waxay dareensantahay in ay go’doon siyaasi ah Ku jirto,ayna jirin wax saamayn ah oo ay leedahay wakhtigan la taagan yahay,waana sababta ay Somaliland sidii tukaha uga daba qaylinayaan!!!
Waxa kasii daran waxa ka dhex guuxaya qudhun iyo qabyaalad,naxli iyo shaki ay ka qabaan Xukuumadda Farmaajo oo ay filayeen maadaama ay is xigaan inuu ka qayb-gelin doono wada-xaajoodka Somaliland iyo Somalia,midaas oo aan dhacayn,waayo Somaliland dawlada ka wakiilka ah Somalia ayay la hadlaysaa,mana keeni karto shirka mid kamida badhasaabadeeda oo farqaha haysta.
Waxay isleeyihiin waxba ka heli maysaan Somalia,sidaa darteed baroortiina Somaliland kula galgasha!!!
Oo annagu ma Farmaajo ayay naga garan waayeen??
Hadday wax ka tabanayaan xukuumadooda maxay iyaga ugala xidhiidhi waayeen?
NINKII DAAROOD AYAA LAGA WAAYAY WIXII LA FILAYAY,WAANA WAXA LALA QAYLINAYAA.
BAL CADEEYA WAXA AAD LA QAYLINAYSAAN?
WAXAN FILAYAA MADAXWEYNE BIIXI INAAD U CABANAYSAAN,RABTAANA INUU WIILKIINA (FARMAAJO) IDIN KALA HADLO.
WAA HAGAAG,LAAKIIN SI ASLUUBAYSAN ULA XIDHIIDHA MADAXWEYNAHA
TIMO-CADDE WUXU KU LEEYAHAY CADAABA GEERAA II KADDAY!!!
OO UU LEEYAHAY FARMAAJO AYAA SOMALILAND SIIYAY DHUL PL!!!
SOMALILAND MA DHUL AY BARYAYSAY AYAA JIRAY,SOO AWALBA MA HAYSAN DHULKEEDA PL ILMADA U QUBAYSO??
DENI WUXU KU FAKARAYAY IN SOMALILAND WADA-HADAL KALA GASHO DHULKEEDA,WUXUSE ILAAWAY INAANU JIRIN WAX AYNU KA WADA-HADALNAA,AANA GORGORTAN NINNA KA GELIN DHULKIISA TAAKO KAMIDA,WAANA MIDA UU WAJI GABAXA KALA KULMAY,KEENTAYNA HADALADA IYO HANJABAADAHA UU KU DAANDAANSANAYO SOMALILAND.
MAR KASTA OO SOMALILAND USII DHAWAATO INAY SOMALILAND HESHO AQOONSI CAALAMI AH,PL WAXA KUSII KORDHAYSA MURUGADA,CIILKA,XIQDIGA,LKN YAA U JOOJINAYA.
Hadaladani aakhirka xiisad colaadeed ay keenayaan.
Farmaajo ha Ku hadlo af Majeerteen,hana kala hadlo Muuse Biixi dhulka SSC ee ay hore ugu gacan geliyeen SNM.
Dhulka aad ka cararteen idinkoo xukuma miyaad rabtaan in aad uga hadashaan miiska Muuse iyo Farmaajo Ku wada hadlayaan?
Farmaajo dhulka uma gacan gelin SNM ee Majeerteen ayaa u gacan geliyay siday maalinba dib ugu durkayeen Garoowe.
Hada hadii Muuse dhacsaday wuxu ka rabay Farmaajo maxaad uga qaylinaysaan soo jaanis aad dayacdeen maaha,kuna weydeen la shaqayn la’aañta dawlada?
Hogaan xumada aan lahayn aragti dheer kuna dhisan xasarad,ximin,qaadicid,ka hor imaansho qaraarada dalka ayaa go’doonka gelisay Pudland.
Hawada la qaybsanayo iyo wax kasta inaad kala fadhiisatan dawlada,lana shaqaysaan ayaad saamigiina Ku heli lahayden,waxadse dooratay mucaaradad aad filaysay in lagu maslaxayn doono,Garowena laguugu imanayo,waxad rabtona laguu yeeli,waxase kugu baryay waagii,waxana la gaadhay kala guurkii,adna halaagii ayaad fadhidaa,mana jirto waxaad Ku faaiiday mucaaradadii aan xikmadda Ku dhisnay,noqotayna dabin aad isku yuururisay.
U malayn maayo waxa aad ka weyday xukuumada hada dalka hogaaminaysa inaad ka heli doontid xukuumad ka dambeysa.